विवाहेत्तर सम्बन्धबाट कसरी छुट्कारा पाउने ? - खबर प्रवाह::Khabarprawaha.com विवाहेत्तर सम्बन्धबाट कसरी छुट्कारा पाउने ? - खबर प्रवाह
विवाहलाई पवित्र नाता मानिन्छ । विवाह बन्धनमा बाँधिएपछि एकअर्काले सुखदुःखमा मात्रै नभई जिन्दगीभर साथ दिने वाचा-कसम खाएका हुन्छन् ।
यसरी गरिएको वाचा र जोडिएको विश्वास कायम राख्न दुवैले उत्तिकै ध्यान दिनुपर्छ । विवाह सम्बन्धमा बाँधिइसकेकाहरुले विवाहेत्तर सम्बन्ध राख्नु राम्रो मानिंदैन । विवाहेत्तर सम्बन्धका कारण दम्पतीबीच दरार पैदा गर्छ ।
माधव नेपाललाई प्रधानमन्त्री बन्न बालकोटको अफर !